Ciidamo ka socda Sierra Leone oo dhaq dhaqaaqyo ka wada Gobolka Jubada hoose – SBC
Ciidamo ka socda Sierra Leone oo dhaq dhaqaaqyo ka wada Gobolka Jubada hoose
Posted by Webmaster on May 24, 2013 Comments
Labadii Maalin ee ugu dambeysay Ciidamo ka socda Dalka Sierra Leone ayaa ka waday deegaano ku yaala gobolka jubada hoose ee koonfurta Soomaaliya dhaq dhaqaaqyo ku soo gaarayaan .
Deegaano hoos yimaada Degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose ayaa siweyn loogaga dareemay ciidamadan ka socda Sierra Leone, waxaana goobahaasi ku dhaqani sheegayaan in gaadiid tiro badan oo ay ciidamadaasi wataan ay soo gaarayaan deegaanadooda.
Ciidamadan oo ku hubeysan Hubka casriga ah iyo gaadiidka dagaal noocyada lagu yaqaan Ciidamada Amisom ayaa waxa ay gaareen deegaano badan oo ay ka mid tahay degmada lagu magacaabo Taabta oo Dhoobley duleedka kaga beegan iyagoo lagu wado in ay u sii ruqaansadaan magaalooyinka waaweyn ee gobolka.
Waxya Qeyb ka yihiin ciidankan kuwa ka mid ka ah howlgalka Midowga Africa ee lagu magacaabo Amisom, waxaana horay loo shaaciyay in ay soo gaarayaan gudaha Dalka siiba gobolada Koonfurta galbeed ee Soomaaliya.
Inkastoo aan la xaqiijin karin tirada rasmiga ah ee soogaaray iminka Soomaaliya ciidankaasi ayaa hadana waxa ay tilmaamayaan dadkii arkay gaadiid ka badan 30 oo kuwa ciidanka ah islamarkaana ay ku raran yihiin ciidan aad u tirabadan.
Maalin ka hor ayay qeybtood ciidankan soo gaareen Degmada Dhoobley iyagoo halkaasi u ah fariisinkooda ay gobolada Jubooyinka iyo gedo oo loogu talagalay in ay ka howlgalaan uga duuli doona.
Ciidan ka badan 800 ayay horay ugu balan qaaday dowlada Dalkaasi Sierra Leone in ay uga qeyb qaadaneyso Howlgalka Amisom ee ka soconaya Soomaaliya, ciidanka iminka yimidna waa ka qeyb.
SBC International Dhoobley.